Gimp ဖြင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးထားသောစာရွက်စာတမ်းများကိုရှင်းပါ Linux မှ
ခရစ်စတိုဖာကက်စထရို | | ပုံစံ, GNU / Linux များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောအဆင့် ၃ ဆင့်သာဖြစ်သည်။
1.- ဖိုင်ကို Gimp ဖြင့်ဖွင့်ပါ
3.- အပေါ်ဆုံးအလွှာ Modo ဝတ်ပါ granul ပေါင်းစပ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ပုံစံ » Gimp နှင့်အတူစကင်ဖတ်စစ်ဆေးထားသောစာရွက်စာတမ်းများ
42 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
အမှန်စင်စစ်, post ကိုတောက်ပ is ဖြစ်ပါတယ်
ဒီ entry အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Bob Fisher ကိုပြန်ကြားပါ
Daniel Rojas ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ငါ Gimp ကို install လုပ်တယ်
Daniel Rojas အားပြန်ပြောပါ
ခရစ္စတိုဖာမင်းက ၁၀ ကြိမ်ရိုက်တယ်၊ ထူးချွန်တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အလုပ်အတွက်နှင့်ဒီဂျစ်တယ်စာရွက်စာတမ်းများရှိခြင်းအတွက်လည်း၎င်းသည်အလွန်ရုပ်ဆိုး။ အဆင်သင့်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ သို့သော်၎င်းနှင့်အတူ LUXURY BROTHER ။
အလွန်ကောင်းသော်လည်းပြaနာတစ်ခုရှိသည်။ ရလဒ်နှင့်အတူသန့်ရှင်းသော pdf တစ်ခုကိုသင်မည်သို့ရရှိမည်နည်း။
ငါစမ်းသပ်မှုလုပ်ဖို့စတင်ခဲ့ပြီး, pdf သိမ်းဆည်းရန်ကြိုးစားသောအခါ option တစ်ခုအဖြစ်မပေါ်လာပါဘူး။ ၎င်းကို ps အနေဖြင့်သိမ်းဆည်းသောအခါဖိုင်သည် BIGGER ဖြစ်သည်၊ ယခုငါ ps2pdf ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုစုံစမ်းရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အစနှင့်မည်သို့မည်ပုံကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိသဖြင့်မူရင်းစာရွက်စာတမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာစာရွက်တစ်ခုဖြင့်အဆုံးသတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပိုကြီးပြီးပိုကြီးတယ် ('သန့်ရှင်းခံရပေမဲ့') ။ အကယ်၍ ၎င်းကို jpg အဖြစ်သိမ်းဆည်းပါက (၎င်းသည်မူရင်းစာရွက်စာတမ်း၏နှစ်ဆ) ဖြစ်သည်။ ပိုမိုထိရောက်စေရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား။
၎င်းကို PDF သို့တိုက်ရိုက်တင်ပို့နိုင်သည်၊ သို့သော်နောက်ပိုင်းစာမျက်နှာတစ်ခုတည်းအဖြစ်၎င်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်
pdftk file1.pdf file2.pdf ကြောင် output ကို output.pdf
သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်စာအုပ်တစ်အုပ်သို့မဟုတ်စုစည်းရန်သင်သွားလျှင်၊ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးထားသောဖိုင်များအတွက်အဆင်မပြေသောကြောင့် pdf ကိုမသုံးပါနှင့်။ djvu ဖိုင်များကိုသာသုံးပါ။
Christopher Castro အားပြန်ပြောပါ
ကံမကောင်းစွာဖြင့် pdf များသည် djvu ထက်ပိုမိုသယ်ဆောင်နိုင်သည် (အချို့သောအသိအကျွမ်းများသည်သူတို့၏ကွန်ပျူတာများရှိထိုပုံစံများမှစာရွက်စာတမ်းများကိုမဖတ်နိုင်ကြ)
တဖန်သင်တို့အဆိုပြုထားသောအရာကိုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်နည်း pdf စာရွက်များကိုသန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီး၎င်းကို jpg (သို့မဟုတ်အခြားပုံစံ) တစ်ခုဖြင့်သိမ်းဆည်းပြီး djvu သို့ပေါင်းထည့်ပါ။ ထိုသတင်းအချက်အလက်မျိုးကိုရရှိရန်အနည်းငယ်ခက်ခဲသည်။
အကယ်၍ သင်သန့်ရှင်းလိုပါက image (OCR) တွင်စာသားအသိအမှတ်ပြုမှုပြုရန်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး၎င်းတို့အားအမြဲပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်ဤနည်းဖြင့်ပုံ (bitmap) သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဒီပုံစံ၏အားသာချက်များ (အရွယ်အစား၊ ပုံစံစသဖြင့်) နှင့်အတူစာသား။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် \_ o /
ဝိုးအံ့သြဖွယ် !! ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်!!!
ငါအံ့သြစရာကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ gimp script ကိုပရိုဂရမ်ရေးဖို့သင်ယူရမယ် =)
Martin ငါ gimp နှင့်အလားတူ application များကိုအမှန်တကယ်မသိဘဲသင်နှင့်အတူတူဟုထင်သည်။ စာကောင်းကောင်းဖြင့်တိုးတက်အောင်လုပ်နိူင်သောစာအုပ်များ ... အကယ်၍ တစ်ယောက်ယောက်က၎င်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုအကြံဥာဏ်ရှိပါကသင်မှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါသလား။ မင်္ဂလာပါ။ အလှူငွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ထိုတောင်းဆိုမှုတွင်သင်နှင့် Moskera ကိုကျွန်ုပ်ပူးပေါင်းပါမည်။ တစ်စုံတစ် ဦး က၎င်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသိလျှင်၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ (သို့မဟုတ်မည်သည့်နေရာသို့သွားရန်လင့်အချို့ပေးသည်) ။
အဲဒီမှာအင်ဖိုရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး macro-ကဲ့သို့သောနောက်ထပ် Script-Fu ခေါင်းစဉ်လည်းပါ ၀ င်သည်။
Ostias အခုငါကြည့်နေတယ်။ ဒါအရမ်းခက်ခဲတာမှမဟုတ်ရင်၊
အချိန်ကုန်လွန်သွားတဲ့အခါခင်ဗျားထင်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့ခက်ခဲတယ်ထင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်သင်ပြီးပြီလား၊ တစ်နေရာရာမှဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ရပြီလား။ သင့်ရဲ့ WP ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမတွေ့ရဘူး ...
ရိုးရှင်း။ အတိုချုပ်နှင့်ထိရောက်သော ...
ရွှင်လန်းမှု !!! ...
Wow, ဒါကြီးလှပေ၏။ အလွယ်ကူဆုံးလို့ပြောနိုင်တဲ့သူ
@AurosZx - စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသောအခါကျွန်ုပ်အနေနှင့်စာရွက်နောက်တွင် BLACK ကဒ်တစ်ခုထားရှိသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်နောက်ဘက်ခြမ်းတွင်ရေးထားသောအရာများကိုပေါ့ပါး။ ကဒ်ကလေးလံသည်နှင့်အမျှစက္ကူသည်အလွန်ချောမွေ့ပြီးအရိပ်များကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
Mega အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့။ GIMP (သို့) Inkscape အတွက်အလားတူအရာတွေအတွက်ဒီအမျိုးအစားအကြောင်းသိကောင်းစရာများကိုသင်ယူဆောင်လာသင့်တယ်
ဒီမှာ Elav သူ Gimp နှင့် Inkscape (သူသည်ငါတို့၏ "ဒီဇိုင်နာ" haha) နှင့် ပါတ်သက်၍ သင်ခန်းစာများစွာပေးနိုင်သည်။
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ အဲဒီအခြေခံတွေကိုလုပ်ဖို့သင်ပေးတယ်။ ဟဟ
Fantastic ။ ရိုးရိုးလေးမဖြစ်နိုင်ဘူး
Joaquin ကို ဟုသူကပြောသည်
ငါစာရွက်စာတမ်းများ scan, GIMP နှင့်အတူ desaturate ပြီးတော့, ထို့နောက်သင့်လျော်သောတံခါးခုံကိုအတူတန်ဖိုးအားဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်း, အရောင်ရွေးသူ tool ကိုအတူရွေးပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါငါရွေးချယ်ရေး reverse နှင့်ဖျက်ပစ်လိမ့်မယ်။
မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံပုံတည်းဖြတ်ခြင်း (သို့မဟုတ်အခြားဒေသများတွင်) ဗဟုသုတမရှိသောသူများအတွက်ကိရိယာများ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနားလည်ရန်မလွယ်ကူပါ။
Hahaha, အများကြီးပြန်လာခြင်းမရှိဘဲ, အလွန်ကောင်းသောအလှူငွေ !!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Gimp2ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်ုပ်မည်သည့်ရလဒ်မှမရပါဟုသင်ညွှန်ပြသည့်အဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။ အကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသင်သိပါသလား။
အကြံကောင်းကောင်း အဲဒါကကျွန်မကိုအများကြီးကူညီခဲ့တယ်။ ယခုဤအကြံဥာဏ်ကိုရာနှင့်ချီသောစာရွက်စာတမ်းများအတွက်အသုတ်လိုက်လျှောက်ခြင်းဖြင့်အလိုအလျောက်သုံးနိုင်သလား။
oj လိယ ဟုသူကပြောသည်
နောက်ဆုံးတော့အဆင့်နှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော် run နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ရလဒ်ကတော့မရှိခဲ့ဘူး။ ပုံမှာအပြောင်းအလဲမရှိဘူး၊ နောက်ကျောမှာကြီးမားတဲ့မီးခိုးရောင်အစက်အပြောက်ရှိနေသေးတယ်။
ငါမသိသောပရိုဂရမ်နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်လှသည်၊ သို့သော်ပုံသည်ထူးခြားသောပုံစံဖြစ်သော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုံစံမှအပဓာတ်ပုံများကိုသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်မပြုပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသုညသဟဇာတဖြစ်သည်။ ငါကြည့်နေမယ်ငါအသုံးဝင်မဟုတ်ဘူး
LibreOffice Draw ကို သုံး၍ နောက်ထပ်ရွေးစရာ (ကျွန်ုပ်တို့အတွက် Gimp ကိုမတပ်ဆင်ထားသေးသည်):
၁။ သင်သည် LibreOffice Draw နှင့်စာရွက်စာတမ်းကိုဖွင့်နိုင်သည်။
၂။ သင်ဆွဲချသည့်ပုံအရမှတ်သားထားသည့် PDF စာရွက်စာတမ်း၏ပထမစာမျက်နှာဖြစ်သောပထမဆလိုက်ကိုရွေးချယ်ပါ။
၃။ Image toolbar တွင်သင်မြင်နိုင်သည်ကိုစစ်ဆေးပါ၊ View menu> Toolbars> Image ။
၄။ Image toolbar တွင် "Graphic mode" drop-down ကိုရွေးပါ။ ပုံသေအားဖြင့် "Default" mode ထဲ၌ "Black and White" ကိုရွေးပါ။
၆။ စာရွက်စာတမ်းအဆုံးသို့ရောက်သည်အထိ ၄ နှင့် ၅ ကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ။
၇။ File Menu> PDF သို့တင်ပို့ပါ။
၈။ "PDF Options" တွင် "Reduce PDF resolution" ကိုမရွေးသို့မဟုတ်အများဆုံးသတ်မှတ်ထားသည်ကိုစစ်ဆေးပါ၊ ပုံနှိပ်သည့်အခါအရည်အသွေးကိုအမြဲလျှော့ချနိုင်သည်။ ထို့နောက် "Export" ကိုနှိပ်ပါ။
Stephen Garrido ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောနေ့။ ငါအချို့သော Linux distro မှရွေ့လျားနေသောမော်နီတာများကိုကူညီရန်လိုအပ်သည်။ ငါလောလောဆယ် ubuntu gnome 14 ကိုစမ်းသပ်နေတယ်။ ငါပြီးသားလည်းအနိုင်ရနှင့် hackintosh လုပ်နေတာနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါ၌ Dell 3400 နှင့် Nvidia gs, gt နှင့် quadro ဂရပ်ဖစ်ကဒ်များစွာရှိသည်။ ငါသည်လည်း msi ဇယားအားလုံးအတွက်ရှိသည်။ ငါမဆိုလမ်းညွှန်မှုတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။ လေးစားပါတယ်
Esteban garrido အားပြန်ပြောပါ
Rodolfo Barreiro ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ tools တွေဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာသင်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်အသုံးဝင်လိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့် version ubuntu mate 16.04 မှာမင်းပြောတာနဲ့ဆင်တူတာမရှိဘူး။ ဟုတ်ကဲ့၊ သင်ထပ်နေသည့် layer တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးနောက်တွင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။ ဖွင့်ရန် dialog ကဘာလဲ။ ဤသည် Gimp ကျွမ်းကျင်သူများသာနားလည်သောလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ရှင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ubuntu9ကတည်းက Linux ကိုသုံးသည်။
Rodolfo Barreiro အားပြန်ပြောပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ခင်ဗျားပြောခဲ့သလိုပဲတကယ်ကောင်းသွားပါတယ် အခုတော့ငါပြင်ဆင်လိုက်တဲ့စာမျက်နှာ ၃၆၀ ကိုဘယ်လိုတင်ပို့ရမှန်းမသိတော့ဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်မလား?
Gimp က 360 စာမျက်နှာ pdf ဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေချင်တယ်။ ငါကဒီကိစ္စရပ်များအတွက်လေ့လာသူဖြစ်၏ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Asus F201E, ၀ င်းဒိုး 8 သို့မဟုတ် Ubuntu ပါဝင်သည့်ပထမဆုံး netbook